Heidi Melin Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Heidi Melin
Vatengesi uye vagadziri vanogona kuwana zvishoma skittish kana kutaura kwemaitiro kukwira. Izvi hazvifaniri kutishamisa. Mushure mezvose, isu tinovashandira ivo kugona kwavo kwekutanga, kufungidzira, uye kunyangwe zvisingaenderane. Tinoda kuti vafunge vakasununguka, vatibvise panzira yakarohwa, uye vagadzire mhando yechiratidzo inomira musika wakazara vanhu. Hatigone kutendeuka totarisira kuti zvisikwa zvedu zvinyatso rongedzwa, vateveri vemitemo vanoteedzera